GreenKhabar – बजार लिँदै पोषणयुक्त कालो चामल, कति पर्छ मूल्य ?
in मूलपेज / स्वास्थ्य / हरित उद्यम / हरित खबर — by GreenKhabar —	December 20, 2016
चामल भन्नेवित्तिकै समान्यतया हाम्रो दिमागमा सेतो चम्किलो दानाको तस्बीर आउँछ। नआओस पनि कसरी हामीले दैनिक रुपमा प्रयोग गर्ने चामल यस्तै हुन्छ।
बजारमा अहिले धेरै जसो पालिस गरिएको सेतो चामल पाइन्छ जो हामीले दैनिक रुपमा उपभोग गर्छौँ र छिटफुट रूपमा रेड राइस, ग्रे राइस, ग्रे ग्रिन राइस, ब्राउन राइसहरू बजारमा उपलब्ध छन्। कालो चामल पनि पाइन्छ, भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा नहोला। छिटफूट मात्रामा बजारमा पाइने यो अरुको तुलनामा महँगो पर्छ।
जि–६० धानबाट कालो चामल बन्छ। धान जि–६० को विकास डा. गिरीराज त्रिपाठीले गरेका हुन्। विशेषतः यो धानको खेती काठमाडौं उपत्यका तथा पहाडी भेगमा राम्रो हुन्छ। यो धानको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता अन्य जातको धानभन्दा बढी रहेको बताइन्छ।
यसलाई ८÷१० घण्टा भिजाएर अन्य चामलमा एक तिहाई मिसाई पकाउनु पर्दछ। यो चामलले स्वस्थ्यमा निकै फाइदा पुग्ने स्मार्ट कृषि नेपालका बजार व्यपस्थापक अनिल रेग्मीले जानकारी दिए।
‘यसको दैनिक एक चौथाई मात्र सेवनले पनि रक्तअल्पता, क्यान्सर, मधुमेह, हृदयघात, उच्चरक्तचाप, अल्जाइमर (अतिसाध्य), मुटुरोग, जस्ता रोगहरुबाट बच्न मद्दत पुर्याउँछ। ‘यसमा रहेको चार प्रतिशत भन्दा बढी आइरनको मात्राले रक्तअल्पता तथा विषेश गरी महिलाहरुलाई गर्भवती अवस्थामा आइरनको कमीबाट हुने रोगबाट बचाउन समेत मद्दत गर्दछ’ रेग्मीले सेतोपाटीसँग भने।
सन् २०१० अक्टोबर २० तारिखमा जर्नल अफ अमेरिकन केमिकल सोसाइटीमा प्रकाशित शोध सामाग्रीअनुसार यस जातिको चामलको सेवनले जलन सम्वन्धी सम्पूर्ण रोगहरु, घाउ सुन्निने, एलर्जी, आदि रोग निको गर्न मद्दत गर्दछ। मानव शरीरलाइ तन्दुरुस्त राखी छिट्टै बुढ्यौली हुने प्रकृयालाई कम गर्न मद्दत गर्ने रेग्मीले बताए।
यो धानको जीवन नब्बे दिनको हुन्छ, अर्थात नब्बे दिनमा यो धान पाक्दछ। यो धानको अपगुण भनेको यसको धान छोटो हुने र यसलाई झार्न थ्रेसर नै प्रयोग गर्नुपर्छ। आजकाल दिनमा ४०/५० सम्म यो चामलको अर्डर आउने गरेको र ५ किलोभन्दा बढी अर्डर गर्नेलाई काठमाडौंभरि निशुल्क डेलिभरीको सुविधा दिइएको बजार व्यवस्थापक रेग्मीले जानकारी दिए।
काठमाडौं बाहेक झापा, महेन्द्रनगर आदी ठाँउहरुबाट पनि यो चमलको माग राम्रो आएको उनले बताए।
एक सय केजी चामलमा ल्युसाइन ०.६२० ग्राम, लाइसिन ०.२८६ ग्राम, म्याग्नेसियम १४३ मिलिग्राम, म्यान्गानिज ३.७४३ मिलिग्राम, मिथियोनाइन ०।१६९ ग्राम, नियासिन ४.३०८ मिलिग्राम, प्यान्टोथेनिक एसिड १.४९३ मिलिग्राम, फेनाइलअलानाइन ०.३८७ ग्राम, फोसफोरस २६४ मिलिग्राम, पोटासियम २६८ मिलिग्राम, प्रोलाइन ०.३५२ ग्राम पाइन्छ।
प्रोटिन ७.५० ग्राम, राइबोफ्ल्याविन ७.५० ग्राम, सेराइन ०.३८८ ग्राम, सोडियम ४ मिलिग्राम, थायामिन ०.४१३ मिलिग्राम, थ्रेओनाइन ०.२७५ ग्राम, जम्मा लिपिड २.६८ ग्राम, ट्रिप्टोफान ०।०९६ ग्राम, टाइरोसाइन ०.२८१ ग्राम, भायलाइन ०.४४० ग्राम, विटामिन बी–६ ०.५०९ ग्राम, पानी १२.३७ ग्राम, जिङ्क २.०२ ग्राम पाइन्छ।
कति पर्छ यसको मूल्य ?
जि–६० धानको बजार मूल्य ४०० रुपैयाँ प्रति केजी पर्दछ। चामलको भने प्रतिकेजी ५०० रुपैयाँ पर्दछ। धान बिउको ७०० रुपैयाँ प्रति केजी पर्नेस्मार्ट कृषि नेपालका बजार ब्यपस्थापक अनिल रेग्मीले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
यो जातको धान, चामल र बिउ भाटभटेनी सुपर माकेर्ट, सस्तो डिल डट कम र स्मार्ट कृषि नेपालमा उपलव्ध छ।